निशाको भाइ हु भन्दै अस्पतालमा अ’पचिरित मान्छे छि’रेपछि निशाको अबस्था ग’म्भिर भे’न्टिलेटरमा राखियो(भिडियो ) – Hamro24News
निशाको भाइ हु भन्दै अस्पतालमा अ’पचिरित मान्छे छि’रेपछि निशाको अबस्था ग’म्भिर भे’न्टिलेटरमा राखियो(भिडियो )
July 20, 2021 adminLeaveaComment on निशाको भाइ हु भन्दै अस्पतालमा अ’पचिरित मान्छे छि’रेपछि निशाको अबस्था ग’म्भिर भे’न्टिलेटरमा राखियो(भिडियो )
दुई हप्ता माथि नर्भिकमा उपचार भईरहँदा निशाको अवस्था सु’ध्रदै गएको उनको दिदीले बताएकी थिइन् । अस्पतालमै कलाकार निसालाई भेट्नको लागि धेरै व्यक्तिहरु जाने गर्दछन्। केहि व्यक्तिहरु निसाको लागि सहयोग लागि जाने गर्दछन् भने केहि व्यक्तिहरु भेटघाटको लागि मात्र जाने गर्दछन्। यस्तै हिजोकै दिनमा पनि म निसाको भाई हु भन्दै केहि फलफुल र जुस लागि निसालाई भेट्न अपरिचित व्यक्ति अस्पताल पुगेका थिए ।
उनले निसालाई भेटेपछि निसालाई जुस खुवाएर उक्त व्यक्ति गएपछि निसा लाई गा’र्हो भएर एक्कासी उनलाई भेन्टिलेटरमा रखिएको छ। अस्पतालमा निसाको भाई हु भन्दै पसेका व्यक्तिलाई दिदी उसाले पनि चिनेको छैनन्। उक्त व्यक्ति दिदिको पछि पनि लागेको दिदि उसाले बताएकी छिन्। उनलाई त्यो व्यक्तिबाट ड’र लागेपछि आफ्नो बुबालाई बोलाएकी थिइन्। त्यस दिन निसाको भाई अस्पताल नगएको दिदीको भनाई छ। उक्त व्यक्तिलाई चिन्नको लागि सिसिटिभी भिडियो हेर्नको लागि उक्त परिवारले माग गरेको छ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
कसैले केही कुरा गर्यो भने सुन्न सक्छिन् र आँसु बगाउने गर्छिन् तर जवाफ दिन वा अरुलाई रे’सपोन्स गर्न सक्दिनन् । हातखुट्टा नै कुँ’जिएर ओ’छ्यान परेको ३ वर्ष भैसक्यो । उनलाई छोडेर कति जान हुदैन ,एक जना उनको साथ्हिमा बस्नुपर्छ होइन भने उनि रुन्छीन बिहीबार बिहान उनको उ’द्धार गरिएको हो । उनको सहयोगको लागि बुबाले अपिल गरेका छन्। बुबाको नाम प्रेम प्रसाद घिमिरे – 9851238952 र उहाको बैंकको खाता न. 0840613613205001 मा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
थप २४ सय ४५ जनामा कोरोना संक्रमण, ३२ को मृत्यु?
December 2, 2019 May 26, 2021 admin
नर्भिक अस्पतालको स्पष्टीकरण पछि निशाको भाई मिडियामा भन्छ्न म अस्पाताल गएकै छैन Cctv चेक गरियोस (भिडियो सहित)